Izindaba - Yiziphi izinzuzo zokusebenzisa i-glassware tableware?
Yiziphi izinzuzo zokusebenzisa i-glassware tableware?
Kukhona izimo zokusebenzisa ingilazi tableware kuwo wonke umlando womuntu, ikakhulukazi emazweni angaphandle athandwa ikakhulukazi. Ngokungqubuzana okuqhubekayo nokuhlanganiswa kwamasiko aseShayina naseNtshonalanga, abantu baseShayina abakhetha i-porcelain kancane kancane baqala ukusebenzisa i-crystal clear glass tableware, ngakho-ke yiziphi izinzuzo ze-tableware ezenziwe ngengilazi, iyiphi ingilazi eyenziwe ngayo?
Ingilazi yetafula usebenzisa iyiphi impahla yengilazi?
I-Glass tableware ngokuvamile yenziwe ngengilazi ephezulu ye-borosilicate, okuyinto yengilazi ekhethekile enezinga eliphansi lokunweba, ukumelana nokushisa okuphezulu, amandla aphezulu, ubulukhuni obukhulu, ukudluliselwa kokukhanya okuphezulu kanye nokuzinza kwamakhemikhali aphezulu. Ayinabo ubuthi futhi ayinayo imiphumela emibi, ayikwazi ukumelana nomlilo namanzi, futhi inokumelana ne-asidi ne-alkaline okuhle kakhulu. Le ngilazi ephezulu ye-borosilicate ayisetshenziswa kuphela ku-tableware yasekhishini, kodwa ingabonakala emasimini amakhemikhali, izimboni kanye ne-aerospace.
Yiziphi izinzuzo ze-glassware tableware?
1, ukusebenza okuzinzile, ukumelana nokushisa nokubanda ukumelana nomlilo. Amahhavini ama-microwave, ohhavini namanye amathuluzi okushisa angasetshenziswa, futhi angamukela indawo ebandayo engazelelwe futhi eshisayo, ngaphandle kokwesaba izingozi eziqhumayo, futhi angalokothi akhubazeke. Sekukhona namabhodwe namapani enziwe ngengilazi angashiswa ngqo emlilweni ovulekile.
2. Impahla iphephile futhi ayinazo izinto eziyingozi. Ingakwazi ukubamba ukudla ngokuzethemba, noma kushisa kumazinga okushisa aphezulu, ngaphandle kokukhathazeka.
3, ukumelana nokuguga. Ayikhiqizi imihuzuko ngisho nangemva kokusetshenziswa isikhathi eside, kulula ukuyihlanza futhi yinhle.
4, Azikho izinsalela zephunga. Ungalokothi ube nephunga nombala wokudla osele ku-tableware eyenziwe ngengilazi yezinto ezibonakalayo ze-peng, kodwa futhi kulula ukuyihlanza, iphephe kakhudlwana futhi ihlanzekile.
5, ukubukeka okuhle. Manje evame ukusetshenziswa glass tableware kukhona obala ngokugcwele, ungakwazi kalula ukubona okuqukethwe kwangaphakathi, esetshenziselwa isitoreji esiqandisini muhle ngokukhethekile futhi elula. Ngaphezu kwalokho, izinto zengilazi ngokwazo zinamathuba amaningi, futhi njengamanje kukhona nezitsha zengilazi ezinamaphethini athambile ongakhetha kuzo.
Kunezinzuzo eziningi zokusebenzisa izinto zokusika ingilazi, yingakho kuthandwa abantu abaningi futhi sekuyindlela engcono kakhulu yokusika abantu abasebenzayo ukuletha ukudla kwabo kwasemini phakathi nalolu bhubhane. Kodwa-ke, lapho ukhetha i-tupperware yengilazi, qiniseka ukuthi uthenga ukukhiqizwa okufanelekile kwe-tableware futhi unake ikhwalithi yophawu nesivalo.